Admin Penalty - isiZulu
SARS Home > Client Segments > Individuals > What if I do not agree > Admin Penalty - isiZulu
KWENZEKANI UMA NGINENHLAWULO YOKUSINGATHA?
Kusukela zingu-4 kuZibandlela 2015 mayelana neNtelangeniso, abakhokhintela sebezokwazi ukwenza lokho egatsheni lakwa-SARS futhi nange-eFiling:
Ukucela ukulengiselwa izinkokhelo
Ukucela ukwephulela inzalo nezinhlawulo (i-RFR)
Abakhokhintela manje sebengakwazi ukucela ukulengiselwa izinkokhelo ngekhompyutha bebe befaka kanyekanye Ukuphikisa. Sicela uqaphele ukuthi Ukulengiswa Kwezinkokhelo kungacelwa kanye kanye nokuPhikisa Egatsheni hhayi nge-eFiling lokhu i-eFiling yona ihambelana nokucela ngokuzimela Ukulendiselwa Izinkokhelo hhayi Ukulengiselwa nokuPhikisa.
Sicela uqaphele ukuthi ifomu le-RFR kanye nelokuPhikisa angeke esatholakala ngokuwacela e-Contact Centre yakwa-SARS.
Inhlawulo Yokusingatha iyinhlawulo ebizwa ngokuhambisana neSigaba 210 soMthetho Wokusingathwa Kwentela. Umthetho uyabophezela ngezinhlobo ezahlukene zokungathobeli imigomo ezifakwe ngaphansi kohlelo lwezinhlawulo zokusingatha ezimisiweyo.
Njengamanje inhlawulo isabizelwa ukulethwa emva kwesikhathi kumbe ukungalethwa nhlobo kwezimbuyiselo. Noma yimuphi umkhokhintela ongalethi imbuyiselo yakhe uzohlawuliswa futhi kuyomele akhokhe le nhlawulo kwa-SARS.
Isu-ngqangi: Ngale kokuthi uyahambisana kumbe kawuhambisani nenhlawulo yokusingatha siyayala ukuba ulethe imbuyiselo yakho ukuze uvimbe ukuqhubeka nokubizwa inhawulo yokusingatha. Inhlawulo izobizwa njalo ngenyanga lapho imbuyiselo ingekalethwa.
Inhlawulo yokungathobeli ukusingatha iqukethe isamba esimile sezinhlawulo kanye nezinhalwulo ezincike kumaphesenti.
Inhlawulo ezobizwa kumkhokhintela yeyeme emalini ethelayo yomkhokhintela ingavundla phakathi kuka-R250 kuya ku-R16 000 ngenyanga ngayinye enokungathobi okuqhubekayo.
Qaphela: Isitatimende Sempendulelo Yezinhlawulo (i-APSA) angeke isathunyelwa kanye nesaziso sokubuyekezwa kwenhlawulo. Umkhokhintela angakwazi ukuthola i-APSA lapha:
Nge-eFiling kubasebenzisi bayo ababhalisile
Ngokushayela i-Contact Centre yakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277)
Kwenzekani uma ngingavumelani neNhlawulo Yokusingatha?
Isicelo Sesaphulelo (i-RFR) ingalethwa uma umkhokhintela ephikisa inhlawilo yokusingatha abizwe yona ngenxa yokungathobeli imigomo.
Uma Isicelo Sesaphulelo singemukelwa kumbe ingxenyana yaso kuphela eyamukelwayo, usengakwazi ukuphikisa isinqumo esithathwe ngu-SARS futhi ungasidlulisa uma uphikisana nemiphumela yohlelo lokuphikisa.
Sicela uqaphele ukuthi angeke ukwazi ukusebenzisa uhlelo lokuphikisa ngaphambi kokuba kulethwe i-RFR futhi isetshenzwe.
Inhlawulo yokusingatha iyadaleka inyanga nenyanga umkhokhintela angathobeli ngayo imigomo yentela, kungaze kufinyelele ezinyangeni ezingama-35. Inhlawulo ngayinye edalekayo izokuba nenombolo yayo ekhethekile. Uma u-SARS esebenza ukuphikisa/ukudluliswa, kungathathwa ukukhokha kancane kancane okusho ukuthi ezinye izikweletu kungaqedwa ngazo.
Ngingasifaka kanjani isicelo se-RFR (Isicelo Sesaphulelo)?
Ifomu Lesicelo Sesaphulelo lingacelwa:
Ngingayiletha kanjani i-RFR (Isicelo Sesaphulelo)?
Ifomu Lesicelo Sesaphulelo lingalethwa:
Ngiyikhokha kanjani Inhlawulo Yokusingatha yami na?
Ungayikhokha inhlawulo yakho yokusingatha ngokusebenzisa omunye wemigudu yokukhokha ekhona.
Uma ukhokha ngokugcwele ‘umkanye’ isikweletu sakho senhlawulo yokusingatha, ungakwazi ukwenza izinhlelo zokuphuthisa no-SARS.
Kuzokwenzekani uma ngingayikhokhi eyami Inhlawulo Yokusingatha na?
Uma Inhlawulo Yokusingatha ingekakhokhwa, u-SARS uzoqoka umsizi (kanjengomqashi wakho) ukuba amqoqele imali. Cindezela lapha ukuthola kabanzi.
Isu-ngqangi: Uma ulethe zonke izimbuyiselo ebezisilele,uma ungakusekela ungakwazi ukucela abakwa-SARS ukuba bakunciphisele inhlawulo ngokufaka Isicelo Sesaphulelo. Isicelo sakho kufanele sinike izizathu ezigcwele ezizosekela isicelo sakho.
Last Updated: 16/09/2016 9:34 AM ​